အနှစ်သက်ဆုံး စာရေးဆရာများ | Layma's World
Posted on November 14, 2007 by layma
– ဆရာမရဲ့ မိန်းမပီသလွန်းတဲ့ ဇာတ်ကောင်မင်းသမီးတွေကို မနာလိုဖြစ်စွာနဲ့ ဖတ်ဖြစ်တယ်……အကြိုက်ဆုံးက……အဖြူ ။
– ဘ၀တွေ အကြောင်းကို လက်တွေ့ ကျကျ သိချင်တဲ့အခါ ဖတ်တယ်…..အကြိုက်ဆုံးက ပျောက်သောလမ်းမှာ စမ်းတ၀ါးဝါး….. ။
– ဘ၀ … ဟာသ…. ကျောင်းသူဘ၀ ဗရုတ်သုတ်ခတွေ ရေးထားတတ်လို့ ကြိုက်တယ် … …. … ဆရာမက ဗိသုကာတစ်ယောက်ဖြစ်လို့လဲ ကြိုက်မိတယ် ထင်တယ်… ငယ်သူမို့မသိပါ ထဲက ဗရုတ်သုတ်ခ ဂျစ်တူး ကို ငါ့များ စောင်းရေးထားသလား လို့တောင် ထင်မိသေး … ။ အကြိုက်ဆုံးက….. ဂျီဟောသူ (အာခီမေဂျာကိုယူဖို့ ဒီဝတ္ထုက ဘေးတီးပေးခဲ့တာ ဖြစ်မယ် …. ။
– စိတ္တဇဆန်တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို ကြိုက်တယ် … ဆရာ မွေးတဲ့ ဇာတ်ကောင် တော်တော်များများရဲ့ စိတ်က ထူးဆန်းတယ် … ခိုင်တို့… မောင်ညိုမှိုင်းတို့…နုငယ် တို့…။ အကြိုက်ဆုံးက …. ခေတ်အဆက်ဆက်ကို ဖြတ်သန်းပြီး ရေးထားတဲ့ … သူငယ်ချင်းလို့ပဲ ဆက်၍ခေါ်မည် ခိုင်… ။
– နိုင်ငံရေးအဖြစ်အပျက်တွေရောယှက်ပြီး နူးညံ့တဲ့ အချစ်အကြောင်း … မတည်ငြိမ်တတ်တဲ့ လူ့ မနောတွေကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ရေးပြတတ်တယ်….။ အကြိုက်ဆုံးက မြကြာဖြူ …. ။
« layma-layma.iblogger.org WordPress and me »
မျှားပြာ, on November 14, 2007 at 10:15 am said:
ဟုတ်တယ်နော် လေးမ ဟတ် ဟတ် ဟတ် ။ 😛
နှင်းဆီနီနီ, on November 14, 2007 at 8:12 pm said:
tzm, on November 14, 2007 at 11:58 pm said:
မမလေး…. သော်တာဆွေရော မကြိုက်ဘူးလားဗျ..
ကျွန်တော်တော့ ကြိုက်တယ်… “ကျွန်တော့်ဘ၀ ဇာတ်ကြောင်း” ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ…
အဲ.. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က စာသိပ်မဖတ်ဖူးဘူး။ အဲ့ဒါကြောင့် တော်တော်လေးကို ဗဟုသုတနည်းနေတယ်။ 😦
layma, on November 15, 2007 at 7:17 am said:
မျှားပြာ … ဟား..ဟား… ဒါပေါ့..မျှားပြာရယ်…။
နှင်းဆီ … အကြိုက်ချင်းတူလို့ ၀မ်းသာမိတယ်… ငါလိုလူ ရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့…။
ကိုသန်. … သော်တာဆွေက သိပ်မဖတ်ဖြစ်ဘူး … ရယ်ရတယ်… တချို့ ကြိုက်တယ် … ။ တချို့ ကြိုက်ဘူး…။
မိုးချစ်သူ, on November 15, 2007 at 1:28 pm said:
nu-san, on November 15, 2007 at 2:04 pm said:
လေးမရေ.. အကြိုက်ချင်းတော်တော်များများတူတယ်။ ဂျာနယ်ကျော် မမလေးကတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ.. အင်း.. “အဖြူ” စာအုပ်ကိုတော့ ကျိုးစားပြီး ရှာကြည့်ရမှာပဲ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြည်းပေးဖတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူး.. 🙂
layma, on November 15, 2007 at 2:18 pm said:
မိုးချစ်သူ… လေးမက စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့အိပ်ရာထဲ ခွေနေချင်တဲ့ ငပျင်းလေ..။
မနုစံ… လေးမ မှာရှိတယ်…မရဲ့… ဟိုလေ… နည်းနည်း…မကင်းရာမကင်းကြောင်း များ ပါမလားလို့ မတင်ရဲတာ…။ 😛
julyDream, on December 1, 2007 at 8:33 am said:
ကောင်းကင်ကို, on December 2, 2007 at 1:14 pm said:
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင်တော့ ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်ဗျို့ ။ တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် စာအုပ်တွေစုထားတာ အအုပ် ၂၀ လောက်ရှိတယ်။ အကြိုက်ဆုံးက “ညီမလေးရယ် စိုးရိမ်မိတယ်” ပြီးတော့ “ခိုင်” ရယ်၊ “မိုးညအိပ်မက်မြူရယ”်၊ “လွမ်းတေးမဆုံးစေနဲ့ စောသခင်” ရယ်၊၊ “လွမ်း”ရယ်။တချို့ ဟာတွေက ဝတ္ထုနာမည်မေ့ကုန်ပြီ။ နုနုငယ်ကတော့ ပထမပိုင်းပဲ ကြိုက်တယ်။ သူ့ အဆက်ကို မကြိုက်တော့ဘူး။Golf အကြောင်းနဲ့ တရားပောာတာတွေများလို့ ။
Aung, on December 6, 2007 at 6:25 pm said:
သားကြွက်, on July 6, 2008 at 3:34 pm said:
မပြည့်, on August 4, 2010 at 5:57 am said:
ခင်နှင်းယုရဲ့ ဖေဖေစာအုပ်လေး ကို Downloadချပြီးဖတ်လို့ရချင်ပါတယ်